Ngaba iNdlela yoKwazi.
Intando ayinabuntu, iyashukuma, isimahla; umthombo wamandla, kodwa hayi ngokwawo amandla. Kuyo yonke iminyaka engenakubalwa yeDini elikhulu liNtando.
Vol. 2 MARCH, 1906. 6
I-WILL (pisces) luphawu lweshumi elinesibini lweZodiac.
Ukusuka kwindawo yokuqala engakhange iboniswe ukubonakaliswa kokulandelelana: ukuhamba (kwe-taurus) kubangela i-homogenible Into (gemini) ukuchaza ubumbano njengento yomoya; Izinto zomoya zenziwa ngumoya omkhulu (umhlaza) ophefumlela kulwandle lobomi (leo); ulwandle lobomi luyantshula kwaye luqaleke lube kwifom (virgo); kunye nokwakheka kukwabelana ngesondo (libra). Ngokukhula kwesondo, into egqityiweyo yomoya-igqityiwe. Xa sex ikhulisiwe, ingqondo (umhlaza) incarnates. Ukulandelelana kwendalo yile: umoya-wento yesondo (libra) ukhulisa umnqweno (nge-scorpio) ngohlobo (virgo); umnqweno uyakhula ube yingcinga (sagittary) ngobomi (ii); ukucinga kuyakhula kubuntu (capricorn) ngokuphefumla (umhlaza); ubume bodwa buye buvele buye buye buye buye buye buye buye buye buye buvele buye buvele buye buvele buye buye buye buvele buye buye buye buvele buye buye buye buvele buye buye buye buvele buye buye buye buvele buye buye buye buvele emphefumlweni. Umphefumlo uphulela ekubeni ngumyolelo (wepisces) ngeshukumo (taurus). Iya kuba yiConsciousness (aries).
Intando ayinamibala. Intando yendalo iphela. Intliziyo iyasasazeka, ayithinteleki. Ngumthombo nemvelaphi yawo onke amandla. Uyakwazi ukwazi konke, unobulumko bonke, okrelekrele konke, okhoyo.
Iya kuxhobisa zonke izidalwa ngokwamandla ayo ukuyisebenzisa, kodwa ayisiwo amandla.
Inkululeko ayinamali konke ukubopha, amaqhina, ukusikelwa umda, okanye izinto ezibambekayo. Intando yasimahla.
Intando ayinabuntu, ayifumaneki, ayinamda, iyazihambisa, iyathula, iyodwa. Intando ikhona kuzo zonke iindiza, kwaye inika amandla onke amaziko ngokwendlela nobume bayo kunye nokusebenzisa amandla. Nangona uya kunika izidalwa amandla okwenza ngokweempawu zazo, izinto, iminqweno, iingcinga, ulwazi, kunye nobulumko, kodwa ziya kuhlala zikhululekile kwaye zingabalulekanga ubunjani bayo nayiphi na intshukumo.
Ngaphandle kwayo akukho nto inokwenzeka. Iya kubolekwa kuwo nawuphi na umsebenzi. Ayizukuvalwa, ayinamida, iqhotyoshelwe, okanye ayinamdla kuyo nayiphi na intsusa, unobangela, ukusebenza, okanye isiphumo. Intando kakhulu
Intando ikhululekile njengokukhanya kwelanga kwaye iyimfuneko kuwo onke amanyathelo njengoko ukukhanya kwelanga kukhula, kodwa ayizukukhetha lowo imnika amandla njengoko ngaphezulu kwelanga kuthatha isigqibo malunga nento eza kuwa. Ilanga likhanya kuyo yonke into esiyibiza ngokuba ilungile okanye imbi, kodwa ilanga alikhanyi ngenjongo yokuba nokuba yelungile okanye imbi. Ilanga liya kubangela ukuba isidumbu sisasaze indyikityha yokufa nokufa, kwaye siyakubangela umhlaba onuka kamnandi uvelise abantwana bakhe ukutya okunika ubomi. Ukukhanya kwelanga kunye nempilo etyhafileyo, intlango enkqantosi kunye nentili echumileyo, iindawo ezinobungozi neziqhamo ezilungileyo, ziyafana izipho zelanga.
Ngaba umthombo wamandla owenza ukuba umbulali abethe isibetho esibulalayo, kunye nomthombo wamandla owenza ukuba umntu enze nasiphi na isenzo sobubele, ukuzilolonga ngokwasemzimbeni okanye komzimba, okanye ngokuzincama. Ukuzibandakanya kulowo ubiza ukuba usetyenziswe, kuya kuba kukhululeka kwisenzo esisixhobisayo. Ayikhawulelwanga kwisenzo okanye kwisizathu sentshukumo, kodwa iyaboleka bobabini ukuze ngamava, kunye nesiphumo sesenzo, umlingisi afikelele kulwazi lokugqibela lwesenzo sokulungileyo nokungalunganga.
Njengempazamo enkulu ukuyithetha loo nto inokuqiniswa njengoko kungathiwa singakhanyisela ilanga. Ngaba umthombo wamandla njengoko ilanga likho. Umntu usebenzisa ukuthanda ngokukhululekileyo ngendlela asebenzisa ngayo ukukhanya kwelanga, kodwa umntu uyayazi indlela yokusebenzisa ngobulumko nakwinqanaba elincinci kunokuba esazi indlela yokusebenzisa ukukhanya kwelanga. Yonke into enokwenziwa ngumntu kukwazi ukulungisa, nokulungiselela izixhobo zokwenza ukukhanya kwelanga okanye intando. Ukukhanya kwelanga kusasaza inani elikhulu lamandla athi umntu asebenzise isahlulo esincinci kuphela, kuba engazi nokuba azilungiselele njani izixhobo ukuze zisetyenziswe, kwaye kuba engazi ukuba zisetyenziswe njani ngobulumko. Ngaba ngumthombo omkhulu wamandla onke, kodwa umntu uyisebenzisa ngendlela enomda omkhulu ngenxa yokuba engenazixhobo zilungileyo, kuba engazi ukuba uza kuyisebenzisa njani, nokuba angazilungiselela njani izixhobo zokusetyenziswa kwayo.
Kwindiza yakhe nakwindiza eshukumayo, ayinakubonakala ngombala kwaye ayibobuntu; kwiplanethi yento kunye nomphefumlo wendalo iphela (i-gemini-aquarius), iyakwenza into ukuba yahluke kwizinto zomoya, kunye nomphefumlo ukukhusela, ukumanyanisa kunye nokuzincama kwazo zonke izinto; Kwindiza yokuphefumla kunye nobuntu (umhlaza-capricorn), amandla omphefumlo ukuzisa zonke izinto ezibonakalayo, kunye nokuxhobisa umntu ngamnye ukuze azazi kwaye angafi; Kwindiza yobomi kunye nengcinga (i-leo-sagittary), yenza ukuba ubomi bakheke kwaye buchithe iifom, kwaye abaxhobileyo bacinga ukufumana iziphumo ezinqwenelekayo ngokokuthanda kwakhe; Kwindiza ekwimo kunye neminqweno (virgo-scorpio), yenza ukuba ifomu ikwazi ukugcina umzimba, umbala kunye nomzobo, kwaye inika amandla umnqweno wokusebenza ngokuqhutywa kukungaboni; kwindiza yokwabelana ngesondo (libra), uya kuyinika amandla okuvelisa iifom, ukudibanisa, ukulungelelanisa, ukulungelelanisa, ukuhambisa, kunye nokuthobela yonke imigaqo-siseko yomntu neyendalo iphela.
Umntu ke ngoko unemizimba yakhe yokwenyama kunye nezinto eziyimfuneko ukufumana nayiphi na into, nokuba yiyo nayiphi na into, amandla, okanye uthixo, konke oku kusetyenziswa kwesenzi somlingo.
Umntu ngamnye akayindoda enye, kodwa yindibaniselwano yamadoda asixhenxe. Indoda nganye kula madoda ineengcambu zayo kwezi zinto zisixhenxe zomntu wokwenyama. Indoda yokwenyama yeyona iphantsi kwaye yona indala kakhulu kwesixhenxe. Amadoda asixhenxe ngala: Yinyama eyomeleleyo; Indoda enesimo; Indoda yobomi; indoda yomnqweno; indoda yengqondo; Indoda yomphefumlo; Indoda yentando. Inkalo yezinto yendoda yentando yomgaqo wesemina emzimbeni wenyama. Umgaqo wesemali ukhululekile kwaye ungafakwanga ekusebenziseni izinto ekubekwe kuwo njengoko kunjalo nomgaqo-siseko wobulumko wentando yamandla avela kuyo.
Kwindlela nganye yokuqhekeza (umhlaza), ukuphefumla kuyavuselela, ngegazi, umnqweno (Scorpio) wokusebenza. Xa eli ziko livuselelwa, kunye nomntu oqhelekileyo, ukucinga kuchukunyiswa ngumnqweno, ohlala ulawula ukucinga, kwaye uya kuthi (pisces), ulandele ingcinga, uxhobise umnqweno wesenzo. Yiyo loo nto ke sifumana intetho ethi: "Emva kuyakuba nomnqweno," esekwe kwinto ethi ayinantsingiselo kwaye ayinabuntu, kwaye, nangona kungenamdla kwiziphumo zawo nasiphi na isenzo, iya kuba ngumthombo wamandla okusebenza; nokokuba enze into intando, umntu ekule meko akuyo kufuneka anqwenele. Ukuba, nangona kunjalo, ingcinga ayilandeli isindululo somnqweno, kodwa endaweni yoko ibhengeza kumnqweno ofanelekileyo, amandla onqwenela emva koko alandele ingcinga, kwaye iphakanyisiwe kwintando. Othantamiso wokuthanda ukuphefumla-(umhlaza-nge-scorpio-pisces), isuka kwimiphunga, kwizitho zesini, entloko, ngendlela yomqolo. I-zodiac ngokwenene sisicwangciso sokwakha kunye nophuhliso lwendalo kunye nawo nawuphi na okanye onke amadoda asixhenxe.
Umgaqo-siseko ngowona uphakathi emzimbeni apho kuya kusebenza khona indalo iphela, kwaye amathuba kunye nokufunyanwa kwendoda kuxhomekeka ekusebenzeni okubekwe kuwo lo mgaqo. Ukungafi kufunyanwa emzimbeni. Kuphela kuxa uhlala emzimbeni wakhe, kuphela ngaphambi kokuba umntu afe, umntu angabi nakho ukungafi. Emva kokusweleka komzimba akukho namnye ongafiyo, kodwa kuya kufuneka aphindwe ngokutsha emhlabeni apha emzimbeni omtsha ongumntu.
Ngoku, ukuze angabinakufa, umntu kufuneka asele “i-elixir yobomi,” “amanzi okungenasiphelo,” “umhlwa wezithixo,” “Amanzi amnandi aseAmrita,” “isosi yesosi,” njengoko injalo babizwa ngeendlela ezahlukeneyo zokufunda. Kuya kufuneka, njengoko iingcali zezobuchwephetsha zikubeka, ukufumanisa “ilitye lesithandi-sobulumko,” apho izinyithi ezisisiseko zigqithiselwa kwigolide ecocekileyo. Konke oku kubhekisa kwinto enye: kwisangqondo-somntu, kunye nemigaqo yesiseko esimondlayo. Lo ngummeli wemilingo apho zonke iziphumo ziveliswa khona. Umgaqo siseko kukuzenzisa, ukuvuselela imiphefumlo, ukomeleza ingqondo, ukutshisa umnqweno, ukwakha ubomi, ukunika amandla, ukubonelela amandla emzimbeni.
Kukho ukulungelelaniswa ukusuka kumjikelo wesine we-quintessence wokutya okune kuthathwe emzimbeni (jonga ukuhlelwa “Ukutya,” Ilizwi, Umq. Mna, Hayi. 6), Ingqondo-indoda. Ukondliwa kwaye wakhelwe ngumgaqo weseminal, oya kuthi. Ukuphumeza esi siphumo sokwakha ingqondo-yomntu, leyo ngumlingo, zonke ezinye izinto kufuneka zihambelane nomgaqo weseminal; Zonke izinto ezenziwayo ebomini, ngenjongo yokuncwesa ubunyani; kwaye, ke ngoko, akukho mnxeba kufuneka wenziwe kwimigaqo yeseminal yokuboleka amandla ayo ekuzonwabiseni okanye ngaphezulu. Ke indawo yendalo iphela iya kwenza ngokwentando ngokuthanda, loo mzimba wengqondo uyaziqonda; ukungafi; ngaphambi kokuba umzimba ufe. Indlela esebenzayo yabafundi kukucinga ngokuqhekezwa kwamaziko aphezulu emzimbeni, de kuthi iingcinga zibekwe ngaphakathi. Nanini na xa iingcinga zitsalwa ngumnqweno kumaziko asezantsi, iingcinga kufuneka ziphakanyiswe kwangoko. Oku kwakha ingqondo-yomntu kwaye kubiza ngqo kumyolelo ovela ngasentla, endaweni yokuvumela ukuthanda kuya kususwa ngumnqweno ovela ngaphantsi. Emva kuya kuma umnqweno, kodwa ngaphezulu komnqweno kuya kuma. I-aspirant kwi-Path of Consciousness yenza umthetho omtsha; kuye uku-oda kutshintsha; ngenxa yakhe: ngaphezulu komnqweno kuyakuma.
Into ephambili kuyo yonke inkqubela yokwenyani kukuqiniseka okuqinisekileyo ukuba umntu ngamnye unamalungelo namandla okhetho, ukuba enze ngokobukrelekrele bakhe, kwaye ukuba ukuphela komda kwisenzo sakhe kukungazi.
Ngobulumko obuncinci kwaye ngokucacileyo akukho mbono ucacileyo malunga nento abayaziyo ngokwenene, abantu bathetha ngenkululeko yokuzikhethela kunye nekamva. Abanye bathi umntu unenkululeko yokuzikhethela, ngelixa abanye besithi umyolelo awusimahla, oko kuyakuba luphawu okanye umgangatho wengqondo. Abaninzi bathi ingqondo kunye nayo yonke enye into kukusebenzela ukusebenzela ikamva; ukuba zonke izinto zinjengoko zinjalo; ukuba zonke izinto ziya kuthi kwixesha elizayo zibe kuphela kwento ebezimiselwe kwangaphambili kwaye zimiselwe ukuba zithandeke, igunya, ubungqina, isiphelo, okanye uThixo; kwaye ukuba, ngaphandle kwelizwi okanye ukhetho kumcimbi, umntu kufuneka angenise.
Inkululeko ayinakuze ifunyanwe ngumntu ongazithembanga ukuba inkululeko isimahla. Lowo ukholwayo ukuba bonke banyanzelwe ukuba benze izinto ngenxa yento amiselwe kwangaphambili engeyiyo eyakhe, ulawulwa kwaye ulawulwa yimeko yokwemvelo eveliswa ngumnqweno obambekayo aze ambambe ebukhobokeni. Ngelixa indoda ikholelwa ukuba ayinawo amandla okukhetha okanye "yenkululeko yokuzikhethela," akukho ndlela yokuphuma ekutsaleni umkhwa ophantsi kolawulo neminqweno yolawulo.
Ukuba iyinyani loo nkululeko isimahla umntu angayenza; ukuba bonke abantu banelungelo namandla okhetho; sizidibanisa njani iinkcazo? Umbuzo uxhomekeke, kunjalo, kwintoni umntu; yintoni kwaye yintoni ikamva. Uyintoni umntu kwaye yintoni, siyibonile. Ngoku, yintoni ikamva?
Ukushukuma okubangela umahluko wokuqala ukusuka kwinto engenanto kwilizwe elinobuntu obungenazimbangi ukuze uphefumlelwe ukubonakaliswa nangaliphi na ixesha lokuvela, umiselwe ngumnqweno odibeneyo kunye nokucinga kunye nolwazi nobulumko nentando yexesha elandulelayo lendalo, kwaye esi sindululo sigqibelele kwaye engaguquki kwisenzo sayo de phantse inqanaba elinye okanye inqanaba lokukhula kufikelelwe njengoko belinjalo kwixesha lokuvela kwezinto ngaphambili. Eli ikamva okanye ikamva. Liphepha lebhalansi yeakhawunti yethu kunye nengxelo yomjikelezo odlulileyo. Oku kusebenza kwindalo yonke okanye ekuzalweni komntu.
Ixesha kunye nendawo yokuzalwa; iimeko zokusingqongileyo; ukuzala, kunye nobume bendalo kunye notyekelo lomzimba; Ngaba ikamva, irekhodi okanye iakhawunti yomlingiswa, olilifa lomlingiswa ovela kwimizamo yakhe yangaphambili kunye namava. Inani lilonke linokuthandeka okanye lingathandeki. Une sheet sheet ekufuneka iqale ngayo kwaye kufuneka ihlawulwe kwiiakhawunti ezindala. Ukuthambekela kunye namandla enyama omzimba kulungiselelwe umda wokusebenza kwengqondo, de kube ii-akhawunti zilungisiwe. Ke, ngaba akukho ukusinda, akukho khetho? Nantsi lapho. Ukhetho luxhomekeke ngendlela eyamkelayo kwaye isebenzise oko aya kukwenza.
Umntu unokunikezela ngokupheleleyo kwaye azinikele kwiingcebiso zelifa lakhe, okanye angabamkela njengeziphakamiso zento efanelekileyo, kwaye abeke isigqibo sokutshintsha. Inkqubela phambili encinci inokubonwa ekuqaleni, kodwa uya kuqalisa ukubumba ikamva lakhe njengoko ebelenzile kwixesha elidlulileyo.
Umzuzu wokukhetha lixesha ngalinye lokucinga. Itotali yeengcinga zobomi bexesha elizayo zizinto eziza kubakho okanye kwilifa lemvelo elizayo.
Umntu akanakho okanye asebenzise ngokukhululekileyo umntu ongenguye ngokwakhe, kwaye akukho mntu ukhululekileyo onamathele kwizenzo zakhe okanye kwiziphumo zezenzo zakhe. Umntu ukhululekile kuphela kwinqanaba lokuba wenza ngaphandle kokunamathela kwizenzo zakhe. Indoda ekhululekileyo kuhlala ihlala inesizathu, kodwa inganamathelwanga kwizenzo zayo okanye kwiziphumo zezenzo zayo.
Ngaba, ngokwayo, iya kuthatha isigqibo kwaye ikhethe ukuba iya kufuna nini ukwazi, kodwa ngekhe kwenzeke phantsi kwayo nayiphi na imeko okanye imeko iya kuba nomdla kuyo, okanye ikhethe, okanye ithathe isigqibo, ukuba iyakwenza ntoni, nangona ingowona mthombo wamandla oxhobisa bonke Iintshukumo zesenzo kwaye zizisa iziphumo zezenzo.
Kwinto yokuhlela kwi Ifomu (Ilizwi, Umq. Mna, Hayi. 12) kwathiwa kukho iindlela ezimbini kuphela: indlela yokuqonda kunye nendlela yeefom. Iya kongezwa le nto ngoku: unqwenela indlela yeefom; Kuyindlela yokuziva.
Ngaba umyili umgcini ongamnqweneleliyo kunye nomyili odala zonke izinto. Ngumthombo othuleyo wawo onke amandla abo bonke oothixo kuyo yonke iminyaka yokuvumelana okungapheliyo kwexesha. Ekupheleni kwayo yonke indaleko okanye ixesha elikhulu lokubonakaliswa, iya kuba sisimo sokuhamba esishukumayo esisombulula yonke into ukuba ibe yeyona nto iphambili, ibetheke kwilungu ngalinye irekhodi lezenzo zalo kubonakaliso; kwaye into igcina ezi mpawu kanye njengokuba umhlaba womkhenkce ugcina iintsholongwane zakwangoko. Kuyakwenzeka, ekuqalekeni kwesibonakaliso esikhulu ngasinye, ukuba njengokuzihambisa, kubangela intshukumo yokuqala kwinto kunye nazo zonke iintsholongwane ukuba zingene ebomini nasentsomini.
Intando yeGazi liNtlawulelo ngalo lonke uloyiso olungenakubalwa. Inamandla okuzazisa kunye nokuba nguConsciousness, kodwa ihlala isemagqabini ukuze ibe liladi apho onke amasuntswana omcimbi anokudlula kuwo onke amanqanaba amava kunye nolwazi nobulumko namandla kwaye, ekugqibeleni, ngokuzithandela, ukuba nguConsciousness.